DAAWO:- Daahir Maxamuud Geele oo daaha ka qaaday Kibirka ka buuxa Farmaajo iyo Khayre “Ma ahan rag yaqaan”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO:- Daahir Maxamuud Geele oo daaha ka qaaday Kibirka ka buuxa Farmaajo iyo Khayre “Ma ahan rag yaqaan”.
DAAWO:- Daahir Maxamuud Geele oo daaha ka qaaday Kibirka ka buuxa Farmaajo iyo Khayre “Ma ahan rag yaqaan”.
January 27, 2020 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 5
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa mar kale ka hadlay sababihii uu xilkaas isaga casilay iyo waxa uu salka ku hayay kala aragti duwanaantii u dhaxeysay isaga iyo dowladdii uu ka tirsanaa.
Daahir Geelle ayaa wareysi uu siiyay Telefishinka DALSAN TV waxaa uu kaga hadlay waxa ay isku qabteen Madaxdiisa, isagoo meesha ka saaray in wararka sheegaya in is casilaadiisa ay ka dambeysay inuu ka madax adeegay amarada Madaxdiisa.
“Ugu horeyn aniga waxaan aaminsanahay kala dambeyn la’aanta qofka hoose ka imaaneysa inay tahay arrin reer baadiyenimo oo ilbaxnimada ka soo horjeeda, xafiis marka la joogo labo mid ayay tahay in la isla shaqeyn karo oo qofka hoose la shaqeyn karo qofka ka sareysa, haddii uu la shaqeyn waayana inuu meesha banneeyo, laakiin inuu meesha joogoo oo amar diido waa dhaqan reer baadiyenimo ah, weli ma dhicin madaxda iga sareysa inay amar diido na dhex marto, laakiin waa kala aragti duwanaan karnaa”ayuu yiri Sheekh Daahir Geelle.
“Dowladeyda waxay jecleyd siyaasadda adkaaday iyo laga adkaaday, awood meel jirta iyo meel aan awoodda aalin in loo kala saarin, awood dowladeed waxaa u aqaan mida dastuurka waafaqsan awoodda qoriga ka timaada ma aqaan, hannaanka dowladda loo wado oo la isugu heynayo, la isugu maslaxaayo fikrada ay ka qabtay iyo aniga waxaa inoo dhaxeeyay 180 digree”ayuu yiri Sheekh Daahir Geelle.
DEG DEG:Wasiirada Beesha Dhulbahante ee P/land oo xilalkooda waayi doona & Qabsashadii Boocame oo Somaliland….
XOG:- Sheikh Shaakir iyo Xaaf yaa usabab ahaa in ay is dagaalaan oo ay ku kala guuraan Dhuusamareeb?.
Marqaannews ma ilaa heerkaas ayay madaxda dawlada fedraalka kasoo horjeedaa waa iga su’aale
Saaxiib saxaafadda saafiga ahi ma aha mid dhinac na u jaanjeerta oo waxaan anigu Marqaan News ka aaminsanahay in ay tahay saxaafad meel dhexaad ah oo warar la soo xulay ama xigsaday oo kala geddisan ka soo baahisa mowduucyo, arrimo, iyo meelo badan oo dalka iyo dibaddiisa isugu jira.
Sababaha aan anigu Marqaan News muddo dheer ugu xirnaa oo uga xiisa dhicin taas ayaa oogu muhiimsan. Sida muuqata ba akhristeyaal badan oo Marqaan ku xirnaa ayaa uga duday oo uga hayaamay calaashaan maxaa siyaasadda beeshayda runta iyo xaqa looga sheegayaa mise ruux madax ah ee aynu isku hayb nahay maxaa wax looga sheeg sheegayaa.
Marqaan News asluubta saxaafadeed ayay ku dhaqmaan oo aad u xeeriyaan in kasta oo aanan anigu maamulkeeda abid wax ku lahaanin sida dadka qaarkii igu tuhmo. Marqaan News waa meesha keli ah ee noqotay masrax furan oo aqoon, talo iyo dood wanaag in la isku weydaarsan karo isticmaar la’aan. Waxaa se lagu soo dhaweeyaa ciddii asluubta iyo akhlaaqda wanaagsan dhowreysa ee si anshax leh wax ugu soo darsanaysa.
Kheeyre iyo farmaajo yaa ardilga kufilin
Waa runtaa ina adeer oo Alle ka sokoow Farmaajo iyo Kheyre madax Soomaaliya uga daacadsan oo ka waddanisan waxii AUN Cabdirashiid Cali Sharmarke ka dambeeyay weli ma soo marin.
Dadaalka xooggan ee ay Farmaajo iyo Kheyre dalkooda iyo dadkooda oogu hagar baxayaan Soomaalida nadiifta ahi ma seeggana waxaa se xaasid iyo nacab sokeeye ku noqday kuwa qurbaha ku naanaabmay oo ay qabyaaladdu dilootay ama qaddiyado fashilmay weli dacalka ku sii dheggan.
Qurba joogtan waddamada aanay lahayn ku dakeynaya ee madaxdoodan ku kacsani waa arddaallo damiirku ka wada dhintay oo aan Soomaalidooda dalka ku darxumeysan wax arxan ah u haynin. Dheg jalaq loo ma siiyo.
War nimankoow naga daaya difaaca farmaajo iyo daarood dabajooga ay waligood mareexaan iska dba joogaan iyagoon garanayn meel ay ku hogaaminayaan, war ama ninka hala qabto ama daba jooga halaga daayo oo kaligii afka dabaysha ha u dhigto, ama waa inuu dadka maqalaa oo la tashadaa, mana dhacayso i difaac markaan afka ciidda la galo marka kalena dawlad baan ahaye ha isoo fara gelin, waa tii meeshaa daarood dhigta.
talo xumo aabeheed